Banaanbax geesinimo leh oo Xamar ka dhacay |
Banaanbax geesinimo leh oo Xamar ka dhacay
Banaanbaxan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa lagu cambaareyay falalka wuxuushnimo ee ay Al Shabaab ay ka geystaan gudaha Soomaaliya gaar ahaan weerarada gaadmada ah ee ay ku qaadan Xarumaha Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo Kuwa AMISOM oo ay ugu dambeysay weerarkii lagu qaadya xarunta ciidanka AMISOM ay ku lahaayeen degmada Janaale oo ay ka qeyb galeen Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Boqolaal haween ah, Guddoomiye ku-xigeenka Haweenka Qaranka, Guddoomiyaha haweenka Gobolka banaadir, xubno ka tirsan Wasaaradda Amniga Qaranka iyo mas’uuliyiinta hay’adda wada hadalka Bulshada ee C.C.D, waxaana kulanka soo qaban qaabiyay Maamulka Gobolka oo gacan ka helay hay’adda wada hadalka Bulshada.
Mid ka mid ah dhallinyaradii kulanka soo qaban qaabiyay ayaa sheegay in dhallinyarada ay muujiyaan kaalintooda amni ee kaga aadan Wadanka, wuxuuna ugu baaqay dhallinyarada Al Shabaab u dagaalanta in diinta Islaamka tahay mid nabad geliyo.
Canab Xasan Cilmi Guddoomiye ku-xigeenka Ururka haweenka Qaranka iyo Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Banaadir Jawaahir Maxamed Baarqab ayaa si wada jir ugu baaqay shacabka Soomaaliya in ay garab istaagaan ciidamada Qaranka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo u taagan inay naftooda u huraan badbaadinta dalka iyo dadka.
Xildhibaan Caasho Koos oo ka tirsan Mudaniyaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa tilmaamay inay muuqato ifafaalo nabadeed oo keentay in shacabka gaar ahaan haweenka ay muujiyaan dareenkooda iyo danta Ummadda, iyadoo ku baaqday in la’iska kaashado aayaha Wadanka.